1 Ka 2017
Ndị ọkachamara IT aghaghị ịnwe ihe ziri ezi na ozi iji mepụta ma chịkwaa ọtụtụ ihe na-enye ike ịkwụsị ndị ahịa ịmalite azụmahịa. Ihe nchoputa nke MCSE na-enye IT aka ichota ohere iji kwado ihe omuma di iche iche nke anatara na ufodu n'ime ihe kachasi ike Microsoft, tinyere SharePoint, Skype maka Business, na Exchange Server. Site n'aka na nnukwu, MCSE Productivity confirmation qualifies the learners for positions, dịka ọmụmaatụ, onyeisi oche ndị isi oche, onye na-elekọta IT, onye nlekọta ụlọ ọrụ, onye ọkachamara na-emepụta ihe ndị ọzọ, nke ahụ bụkwa mmalite.
Echiche nke Otu
Ihe nyocha Microsoft Product Certified Solutions (MCSE) na-egosi na ndị na-amụ ihe nwere ihe ọ na-atụ anya ka ha mee ka ndị enyi ha gaa n'igwe ojii, nwee ike ịbawanye uru nke ndị ahịa na ime mgbanwe, belata ozi nhụsianya, ma melite nchebe ozi. MCSE: Ọdịdị na-arụpụtaghị, dị ka ọkwa niile dị elu n'okpuru usoro nhazi nke Microsoft, nyere ndị na-amụ akwụkwọ aka ilele ọdọ mmiri iji nyochaa ihe ha chọrọ.
Iji ruo eruo maka MCSE: Nzere njirimara na-arụpụtaghị ọrụ, ndị mmụta kwesịrị ibu ụzọ merie MCSA: Office 365 ma ọ bụ MCSA: Nkwado Windows Server 2012 dị mkpa. N'ikpeazụ iji merie nkwenye mmụta dị mkpa, ndị na-amụ ihe ga-enyocha otu nyocha iji nweta MCSE: nkwenye arụpụtaghị ihe.
MCSE: Nyocha na-arụpụtaghị arụmọrụ gụnyere ule asatọ, nke CBT Nuggets na-akwadebe.
Nhazi na Deploying Microsoft Exchange Server 2016 (70-345)
Ịnyocha MicrosoftNicrosoft ServerPoint 2016 (70-339)
Ịmepụta Voice Enterprise na Skype maka Business 2015 (70-333)
Ihe Nleta nke Microsoft Skype maka Business 2015 (70-334)
Ngwọta Nleta nke Microsoft SharePoint Server 2013 (70-331)
Nchọpụta dị elu nke Microsoft SharePoint Server 2013 (70-332)
Ngwọta Nleta nke Microsoft Exchange Server 2013 (70-341)
Nchọpụta dị elu nke Microsoft Exchange Server 2013 (70-342)
MCSE: Nkwenye na-arụpụtaghị ihe, kpaliri na 2016 dị ka ngbanwe maka MCSE: SharePoint, MCSE: Nkwurịta okwu, na MCSE: Akwredit na-eziga ozi, bụ nke a kwụsịrị March 31, 2017.
Mgbe niile, ndị na-amụ ihe na-achọ nkwado nkwenye ọkachamara kwesịrị inwe atọ (3) ma ọ bụ karịa afọ na-arụ ọrụ Microsoft, karịsịa Office 365 ma ọ bụ Windows Server 2012 (ma ọ bụ 2016).
Ihe omuma a na-esite na nyocha ndị dị mkpa maka ule ọ bụla n'ime ọdọ mmiri ndị ọzọ nke mejupụtara MCSE: Nzere njirimara na-arụpụtaghị ọrụ.
Oge edere maka ule: awa 2 (120 nkeji) kwa ule
Ọnụ ọgụgụ nke ajụjụ: 40-60 * maka ule ọ bụla
Ihe na-agafe: 700 ** maka ule ọ bụla
Ụdị okwu: Mkpebi ọtụtụ; mkpebi dị iche iche / ọtụtụ azịza; ọnọdụ
Ndebanye aha nyocha: Microsoft na-amụta ma ọ bụ Pearson View
Ọ ga-adịrị mma ma ọ bụrụ na ị gụọ MCSE: Nyocha a na-arụpụtaghị arụmọrụ nwere ike ịnweta maka nnyefe nke nnyefe n'Ịntanet.
Ọnụ ego nyocha: $ 165 (USD) kwa ule
Aptitudes atụle: Akwụkwọ ọ bụla nyocha nke nyocha na saịtị Microsoft na-enye gị ikike nke ikike (ikike n'efu) iji chịkwaa nyocha gị na njikere gị.
* Microsoft adịghị ekesa ọnụ ọgụgụ ziri ezi nke ajụjụ ndị metụtara nyocha ya. N'ihi ya, ọnụ ọgụgụ nke onye na-amụrụ ihe ga-ahụ dịgasị iche na ọkwa gbasara ikpe.
** Ebe ọ bụ na ọtụtụ ajụjụ dị iche iche, ọ bụghị ezigbo na ndị na-amụ ihe aghaghị inweta mmeri 70 bụ isi iji mee ka nyocha ahụ.
Ihe nyocha Microsoft nwere ihe ngosi maka ịnwale. Ọtụtụ ndị na-amụ ihe na-achọpụta na ọ dị mkpa ka ha were ihe nyocha karịa ugboro abụọ iji mezuo ihe dị irè. N'ụzọ dị mwute, Microsoft maara banyere ọkwa nke ule nke metụtara nyocha ha, ma na-enyeghachi akwụkwọ nyocha, na-enyere ndị na-amụ ihe aka ịleleghachi nyocha na obere ego. Ọ bụrụ na ọ bụghị nsogbu dị oke mkpa rịba ama na nyocha ahụ nwere ike ọ gaghị enwe ike ịnweta. N'ihe banyere nkesa a na-ebipụta ugbu a, nyocha ọ bụla metụtara MCSE: arụpụtaghị ihe na-ejikọta nyocha, ma nke ahụ nwere ike ịgbanwe. Ndị na-amụ ihe kwesịrị ime nnyocha nyocha Na-eme ka ihe dị mfe iji mee ihe iji zere ịgafe ohere ohere maka ọnụ ụzọ.
Ihe nkwado Microsoft MCSE ziri ezi ruo ogologo oge. Dịka Microsoft gosipụtara, nnyocha nyochaghachi dị ka nke ugbu a maka MCSE na MCSD na-azọrọ na a ma ama. Nnwale nyochaa na-ekpuchi ihe site na ule ndị e weere na mbụ nweta akara, na nkwenye kpọmkwem banyere ọhụrụ ọhụrụ na mgbanwe usoro. Site nyocha usoro nhoputa ohuru ohuru nke iji nyocha ihe, ndi na-amu ihe nwere ohere ichoputa ugwo ha kwa afo ka ha weghachite nkwenye.
MCSE: Ọgaghị arụ ọrụ bụ nkwenye dị elu ọkachamara, ma dịka onye nzere nhazi, ndị na-amụ ihe nwere ike ịgbasawanyeghachi ha ma ọ bụ gbanyekwuo nkwenye Microsoft ọzọ dịka ọbịbịa ọzọ.
N'ime etiti Microsoft, MCSE: Azụlite na-adabere na ntọlite ​​nke MCSA: Windows Server 2012 na MCSA: Nchịkọta Office 365, na-enye ndị nkụzi nhọrọ ole na ole metụtara nkwenye:
MCSA: Office 365 (gụnyere ule abụọ: 70-346 na 70-347)
MCSA: 2012 Windows Server (gụnyere nyocha atọ: 70-410, 70-411, na 70-412)
MCSA: 2016 Windows Server (gụnyere nyocha atọ: 70-740, 70-741, na 70-742)
MCSA: Windows 10 (gụnyere ule abụọ: 70-697 na 70-698)
MCSE: Nrụpụtaghị (na-elegharị anya ọkachamara ndị a: 2016 Exchange Server ma ọ bụ 2013, SharePoint Server 2016 ma ọ bụ 2013, ma ọ bụ Skype maka Business)
MCSE: Platform na Ihe Njirimara (nyochaa ihe ndị a: Azure, Cloud Data Platform, Nnukwu Nchịkọta Data, 2016 Windows Server, Akụrụngwa Ntanetị, ma ọ bụ ígwé ojii n'onwe)
MCSD: Ihe Nrụpụta Ihe (na-achọgharị ihe ndị a: Azure, Universal Windows Platform, SharePoint 2013, ma ọ bụ Visual Studio)
Ndị na-amụ ihe na-enweta MCSE: nkwenye na-arụpụtaghị ọrụ bụ ndị isi na-achịkwa mgbe niile, na dịka ndị ntụzi nduzi, enwere oge dị mkpa maka ozi na ikike ndị a na-achọpụta na mmepụta ihe na-emeghe ihe na njirisi. Ya mere, n'èzí nke eluigwe na ụwa Microsoft, ndị mmụta na-atụlekarị:
CompTIA Linux + na LPI LPIC-1 (gụnyere ule abụọ: LX0-103 na LX0-104)
VMware vSphere 6 Ntọala (gụnyere naanị otu ule: 6 Ntọala 2V0-620)
LPIC LPIC-2 (gụnyere ule abụọ: 201-400 na 202-400)
VMware vSphere 6 VCP6-DCV (gụnyere nanị otu ule: VCP6-DCV)
Countrycale.com na-enye akwụkwọ ntuziaka na-akwụ ụgwọ maka enyemaka ndị na-amụ ihe na-ahọrọ ugwo ugwo kwesịrị ekwesị maka oghere maka ọrụ metụtara MCBRE accreditations. Countrycale.com na-akọ ọnụahịa nke $ 50,075 na $ 144,966 maka kpakpando IT ndị jidere ikikere MCSE, tinyere MCSE: Nrụpụta. Akụkụ ndị na-emechi anya maka ndị na-enwe ikikere MCSE na-agụnye nlekọta IT, onye isi IT, onye na-elekọta ụlọ ọrụ, na ụlọ ọrụ ndị agadi.
Enwere nkwenye akwụkwọ Microsoft dị ka pyramid, na ọkwa ọ bụla nke nkwenye ndị na-amụrụ ndị na-akwọ ụgbọala elu, nke dị nkenke, nkwenye siri ike. N'okpuru pyramid Microsoft, ndị ọkachamara IT na-ewuli ntọala nke MTA (Microsoft Technology Associate). N'uzo ndị a bụ MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate) na MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer), nke na-etinye ọtụtụ nkwenye kachasị elu n'etiti ọkachamara IT ndị Microsoft na-enye, tinyere Server 2012, Office 365, na Azure. N'ikpeazụ, MCSE (Microsoft Certified Solution Expert) na-ekwu banyere ụdị nzere nchịkwa kachasị mma Microsoft nyere ma nye ndị na-amụ ohere ohere ịmepụta ọkachamara akọwapụtara na MCSA.
Dị ka Microsoft na-egosipụta ya, akwụkwọ ikike MCSE na MCSD ọhụrụ (MCSE: Cloud Platform and Infrastructure, MCSE: Mobility, MCSE: Data Management and Analytics, MCSE: Productivity, na MCSD: AppBuilder) na-agbanwe ya na Ụlọ Ọrụ Nlekọta, nke Microsoft Network Partnership iji mara ọdịiche dị iche iche nke nkà ndị Microsoft n'ogbugbu na ndị ahịa zuru oke. Ntinye aka ndi a enweghi ihe ndi ozo. Kama nke ahụ, ụbọchị ịmepụta ihe na-egosi otú ị si amata mgbanwe dị iche iche.
Kwa afọ, ị nwere ohere ịwụnye nkwenye site na -ele akwụkwọ nyocha site n'aka ndị omeiwu, na-egosi mmasị gị n'ịgbasapụ ma ọ bụ na-agbatị ikike gị na Ụlọ Ọrụ Mara mma. Oge ọ bụla ị nwetara nzere ntozu, a na-agbakwunye amaokwu ọzọ na ederede gị. Usoro a na - anọchi anya mkpa dị mkpa nke ịchọrọ otu nyocha ugboro ugboro (MCSD) maọbụ ka elekere anya (MCSE) iji mee ka ị nweta ikike ịbanye na ya. Na-enwetakwu banyere usoro ọhụụ Microsoft.
Malite nyochaa Microsoft ndị ọzọ na-akwadebe ma kwenye na ụzọ ọzọ iji meghee oghere mmepụtawanye ọkachamara.
MCSE: Ngosipụta na-arụpụtaghị arụmọrụ na-egosi na ị nwere ikike na mmetụta nke ọrụ maka ịmalite na-amụ ihe na nkwalite nke ọganihu Microsoft, gụnyere ihe jupụtara, dịka ọmụmaatụ, Exchange Server, Skype maka Business, na SharePoint. Nkwenye a na-agagharị dị ka ihe akaebe nke oke aka na ike gị n'ịlekọta isi ọrụ ọrụ. Gị MCSE: Nkọwapụta na-arụpụtaghị ọrụ ga-emeghe ọtụtụ ụdị ọrụ ọnụ ụzọ dị egwu ka ị na-agbalị imeju ihe mgbaru ọsọ ndị ọkachamara gị.
Microsoft Office 365 na SharePoint: Njikọ zuru okè